DEG DEG+AKHRISO: Wararkii ugu dambeeyey xaaladda Ismaamulka Soomaalida Itoobiya, Cabsi laga qabo dagaal ka qarxa DHagaxbuur. – Puntlandtimes
DEG DEG+AKHRISO: Wararkii ugu dambeeyey xaaladda Ismaamulka Soomaalida Itoobiya, Cabsi laga qabo dagaal ka qarxa DHagaxbuur.
Xaaladd dagaanansho la’aan ayaa ka jirta magaalada Dhagaxbuur ee Ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya, ka dib markii ay halkaas iskugu aruursaden Kumanaan katirsan ciidamada Liyuu Police-ka ee daacada u ahaa Madaxweynihii hore Ismaamulkaas Cabdi Maxamuud Cumar.
Cutubyo kamid ah ciidamada Milateriga Itoobiya ayaa tagay duleedka magaalada, waxayna la kulmeen waxgaradka magaalada Dhagaxbuur oo ay kala hadleen in daganaanshaha laga shaqeeyo oo aysan dooneyn dagaal ee ay ku socdaan amar dawladeed oo ay ammaanka ku sugayaan.
Cabsida ay qabaan dadku waxay ka dhalatay markii Saraakiishii ugu sareysa ciidamada Liyuu Police-ka ay iskugu yimaadeen duleedka Dhagaxbuur, sidaas oo kale ay u sheegeen waxgaradka magaalada in ay la dagaalami doonaan Milateriga Itoobiya.
Ciidamada Liyuu Police-ka oo ah ciidamo dhisan waxay ka gadoodsan yihiin Madaxweynihii hore ee Ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo aysan ogeyn halka lagu hayo, ayna dalbanayaan in lasii daayo haddii uu xiran yahay.
Deegaanka Cobale oo u dhaxaysa Dhagax-buur iyo Jigjiga ayay 3-dii maalmood ee lasoo dhaafay daganaayeen cutubyada ciidamada Liyuu Police-ka, waxayna ka war-sugayaan wararkii Addis Ababa, laakiin ugu dambeyn shalay galab ayay amar ka helen taliskooda sidda ay wararku sheegayaan uuna ku amray in ay ka guuraan saldhigaas oo dagaan daafaha goobaha muhiimka ah ee Dhagaxbuur, Marsin iyo Gobalka Qoraxay.
Lama hayo tirro sax ah oo ku aadan ciidanka, balse dadka sidda dhaw ula socda ayaa ku qiyaasaya in ka badan 30Kun oo u tababaran sidda Milateriga, waxaana fikradda Asaaska ciidanka lahaa Ra’iisulwasaarihii hore ee Itoobiya Meles Zanewi, kaas oo fahamsanaa in mar uun isbedel ku imaan doono Hogaaminta dalkiisa.
Labada Ismaamul gobaleed ee Soomaalida & Tigree-ga oo kaliya ayaa leh ciidan siddan loo qalabeeyey, tiradoodana lagu dhaweeyey kuwa Milateriga dalka Itoobiya, waxaana labada dhinacba ay shaki weyn ka qabaan aarsi uga yimaada Qowmiyadaha Oromada iyo Xabashida.
Welwel weyn ayay ku haysaa dadka deegaanka in ciidamadas iyo kuwa Milateriga Itoobiya ay dagaalamaan, haddii xabadi dhacdo waxaa cabsi laga qabaa in ay dagaalo xoog leh ka dhacaan deegaano badan oo ay ku jiraan deegaanada kuyaala Ceelasha Shidaalka ee dhawaan la furay.
Kumanaan qof oo ka barakacay magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida, ayaa horey u gaaray magaalada Dhagaxbuur, markale ayay wajahayaan cabsi xoog leh oo ku aadan deegaanadii ay nabadda soo bideen.